ICold yeRolled yensimbi Tube / Ipayipi
Ityhubhu yensimbi emnyama / imibhobho
Square Kwaye okoxande Steel Tube / Pipe
Ityhubhu emnyama yentsimbi emnyama / umbhobho
Ishushu eqengqelekayo ye-Tube / Ipayipi
Iglasi yentsimbi / ityhefu yomatshini
Isisu seTyhubhu / iPayipi
Ishushu esiDutyisiweyo seGcuwa yeTB / iPipe
Iibhola zentsimbi eziqaqambileyo
Ikhoyili zentsimbi kwalenza
I-1000mm Iikhoyili zentsimbi
Ipleyiti yentsimbi / iphepha
Amaphepha eNtsimbi eMnyama
Ishushu esijikelezwe ngePlate
Umbala oKhoyo i-Zinc Coil / i-coil ye-Steel Coil
Ipeyinti ejijekileyo / eDityanisiweyo yentsimbi
Yiba Nenkxalabo malunga neNtlawulo
ngomphathi ku 20-06-09
Ingqwalaselo Ngenxa yetekhnoloji entsha ephuhla, ubomi bethu butshintshe kakuhle, kodwa ukukopa okuninzi kuyavela kwinethiwekhi. Omnye wabathengi ababalaseleyo abavela kwi-Euro yalahleka ngaphezulu kwe-15000usd ngo-Epreli, 2020. Uyaqhubeka nokungenisa iikhoyili zensimbi kuthi, kodwa ngenxa yokusasazeka kwentsholongwane, ufuna ukwenza ishishini kwimaski kunye nemfuno ...
Isityalo esitsha silungele ukusebenza
Umnumzana Xue yingjian, ebesebenza kwintsimi yetsimbi ngaphezulu kweminyaka engama-20. Udibene neqela kushishino lokuphuma kwelanga ngonyaka ka-2000, kwaye esenza intengiso kwi-bazhou ekuphumeni kwelanga i-wuhuan pipe co., Ltd. Waba ngumphathi wentengiso, umphathi wemveliso, umphathi jikelele ngokusebenza kwakhe ngenyathelo ngenyathelo. Wamisela i-SUNRISE HOLDINGS CO ...
I-Carton Fair Onlline Incoko
ngomphathi ku 20-06-06
Bathandekayo BONKE Siza kuya kwi-guangzhou carton fair ukusuka nge-15 kaJuni ukuya nge-25 kaJuni ngenxa yokusasazeka kwintsholongwane kwihlabathi liphela, asinakuya eGuangzhou ukudibana, ngoko ke senza umboniso we-Intanethi. Itekhnoloji entsha ukubonelela ngomboniso kwi-Intanethi. Nokuba usekhaya, ungayibona into yethu. Uyabona yonke ...
Shengfang Township, Langfang City, Hebei kwiPhondo, China